Angiyena umdlwenguli mina | News24
Angiyena umdlwenguli mina
PHOTO:nompendulo ngubane Umndeni wakwa Dlamini othi wahlukumezeka ngesikhathi uMnu Mzwakhe Dlamini ebhecwa ngecala lokudlwengula. Lapha uhleli nonkosikazi wakhe uNokuthula Dlamini
UKHALA ngokungcoliswa kwegama lakhe umlisa ona 57 othi wabhecwa ngobende inyama engayidlanga ngecala lokudlwengula intombazanyana eyayineminyaka eyi 9 yakamakhelwane ngesikhathi ebekwa icala.
UMnu Mzwakhe Dlamini owagwetshwa iminyaka eyi 16 ngonyaka ka 2013 ebekwe icala lokudlwegula uthi ufisa umphakathi wase Smero wazi ukuthi akanacala futhi akazange adlwengule njengoba wayechazwe njengomdlwenguli.
UDlamini waboshwa wabe esefaka isicelo sokuphikisa icala lakhe ngoba ezazi ukuthi umsulwa ngo 2013. Isicelo sokuphikisa saphumelela njengoba uDlamini etholakale engenacala ngoNhlolanja nonyaka. Intombazanyane egama layo laziwa iphephandaba i-Echo yayineminyaka eyi 9 ngesikhathi uDlamini kuthiwa uyidlwengulile.
Echaza mayelana nalesi sehlakalo uthe wabikwa emaphoyiseni njengomuntu odlwengulile ngonyaka ka 2010 nokulapho abe eseboshwa. Ngokusho kukaDlamini obenonkosikazi wakhe uNokuthula Dlamini ngesikhathi evakashelwe iphephandaba i-Echo eMbali Unit 2 lapho asehlala khona uthe ukuboshwa kwakhe nokuthukwa abantu bendawo kuyisilonda esingeke saze saphela kuye.
Lo mndeni waphoqeleka ukuthi usuke endaweni yase Smero uthuthele eMbali Unit 2 kubo ka Dlamini ngenxa yokuthi umndeni wakhe wabe ungasahleli kahle endaweni yaseSmero.
“ Ngokobufakazi obabuthulwa enkantolo abomndeni wentombazanyana bathi ngayidlwengula ngonyaka ka 2008 kodwa ngize ngaboshwa ngo 2010. Okwakuxaka ukuthi ubufakazi obabuthulwa enkantolo babungahlangani. Umndeni wami ikakhulukazi unkosikazi wami wangeseka ngoba wayekholelwa ukuthi anginacala. Lo mndeni owangibopha sasisondelene nawo angazi ukuthi ngabe yini eyadala ukuthi bangibophele amanqina enyathi ngalolu hlobo. Ngalihamba icala kwaze kuba kufika unyaka ka 2013 ngagwetshwa iminyaka eyi 16. Ngangena ejele kodwa angizange ngiphele amandla kodwa ngafaka isicelo sokuphikisa isigwebo nokwagcina ngokuthi ngiliwine icala ngonyaka ka2013 esho uDlamini.
UNkk Dlamini yena uthe lesi sehlakalo sawuhlukumeza kakhulu umndeni wakhe ikakhulukazi abantwana bakhe abafunda isikole.
“Ngangazi ukuthi umyeni wami akanalo icala yingakho ngameseka kwaze kwaba sekugcineni. Okubuhlungu ukuthi nogogo wengane sathola umbiko ukuthi ushonile. Kube buhlungu ukuthi ashone kube kukhona icala elingaka nobuhlungu umndeni wami owabuzwa. Siyafisa ukuthi umphakathi ikakhulukazi lona waseSmero ukuthi wazi ukuthi umyeni wami akazange adlwengule futhi nomthetho usukwazile ukuthi lokho ukuveze,” esho unkosikazi kaDlamini.
Uqhube wathi yize ehlale izinyanga ezine ejele kodwa impilo yakhe ike yama ngesikhathi evulelwe ngecala angalenzanga.
“Sikuzwile ukuhlukumezeka sigqigqa inkantolo ngecala elingekho. Ngifisa nokudlulisa umyalezo emphakathini wonke waseSmero ukuthi ungayenzi into yokubheca umuntu ngento angazange ayenze. Imoshakele impilo yomyeni wami nomndeni wethu uwonke nje,” kusho unkosikazi kaDlamini